LOU JING: AFRO-CHINESE, ZVINHU ZVINONYANYA MUCHIDIKI CHEMAUZVO, UYE DZINOGONESA MIBVUNZO YEMAHARA MUCHINA MUZVIMBO - AFRIKHEPRI
kugashira BUSINESS FACTS
Lou Jing, vechidiki vechiChinese 20 makore, ndiwo Métis. Baba vake (vasingazivikanwi) vaiva madema, uye amai vake vaChinese. Baba vaLou Jing, vafambisi veAfrica neAmerica, vaiva nehukama naamai vomusikana vasati vasvika kumusha, vasingazivi kuti akanga ane mimba naye. The musikana, mumwe kukwikwidza nokuti American Idol imwe mhando womunharaunda (Ngatitaurei Enda! Oriental Angel), kwakamutsa aval kuti musaruraganda siyana ari Chinese padandemutande, uye zvinoita sokuti ayo ruvara ... ndinokuzivisai kufungidzira zororo.
Padandemutande, pakati zhinji siyana, vakawanda Chinese Internet vanoshandisa zvinoratidza kuti Chin Lou Lou Jing achiri 5e Paakasvika Shanghai, uye kusarurana kana pakanga, zvaisazova asvika kuti chinzvimbo. Maererano vanoshandisa izvi, Lou Jing chakatanga vakarwisa pamusoro Net, pashure pokunge awana amai kuti vanonyengera paari aimbova murume, Lou Jing upombwe izvo aizova mugumisiro. Kunyange zvakadaro, chero zvikonzero zvakakwira, zvakaoma kusaona kuti shure kwekushungurudzika kwaakatambura, ndiwo mararamiro aLou Jing (uye avo vaifungidzirwa kuti inharaunda iyo inoreva) yakanyorerwa. Nenzira imwecheteyo, kurwiswa kwacho kwakaratidzika kuwedzera simba sezvo Lou Jing akafambira mberi pachiratidziro. Kutaura kuti izvo zvinopupurirwa zveupombwe hwemai vake zvaingova chikonzero chekuda zvechisarudzo chevamwe zvinoratidzwa, hatisi kure.
Ichi chiitiko chinofanira kuenzaniswa nehurumende yaVa Obama pfupi yapfuura kuenda kuChin, uye kushingaira kwake kunomutsa pakati pevechidiki vechiChinese. Zvinoshamisa, kufanidza mutungamiri weAfrica, asi kushora chiChinese chivara chine ngozi, tichifunga kuti haisi panzvimbo yayo mune kuratidzwa kunoitika munyika YAKE (kungoitika, zvakakodzera kuti Yeuka kuti Lou Jing ndiye chiChina, kwete nekugamuchirwa, asi nekuzvarwa). Ndizvo zvichitsvaga maShayina Web (masayiti muChirungu nokuti Mandarin neni, ndinosuruvarisa!), Handigoni kubatsira asi kuenzanisa imwe, kufanana kweChina mu Black Africa. Hazvisi izvo zvisingawanzoitiki muAfrica guru kuona vechiChinese vachitengesa zviyo mumugwagwa, kana vechidiki vechiChinese vanotengesa maitiro avo kune ava vadzidzisi (saizvozvowo, kunyange nehofisi gumi, mukadzi anozviratidza, nguva dzose zvakanaka kutora kumba).
Vakuru vemaShayina vepanhau vakanyatsotsoropodza rusarura rwevashandisi veIndaneti. Hongu, chokwadi chokuti Lou Jing akanga ari mumwe wevashanu vaipedzisa muShanghai anoratidza kuti chikamu chevanhu chikaona mukati maro kupfuura ruvara rweganda. Asi, kana China ichida kuti iite nhare yekupikisana neUnited States, zvingatora zvinopfuura kungotaura chete uye kushora kwevanhu. Tinofanira kudzidzisa China uyo achiri kutarisira kubata semunhu asina kusimba mwana akaberekwa neChinese uye mutema. China inenge ichida chaizvo kudzidzisa vanhu nezvekuremekedza vamwe. Asi, kuziva ruzivo rweAfrica kuti ruremekedzwe ... ruregerero, kutsigira zvinhu zvose uye kuti tifambe zvakasimba pamakumbo, hapana chichaitwa kuti titarisire ruremekedzo rwandinofunga.
Chimwe chikonzero chokutaura kuti kwakanga kusina kurwisana kwechisarura mumhosva yeLou Jing: musikana wacho pachake mubvunzurudzo dzinoverengeka, akati akaziva kuti akanga ari mutema, nekuitawo muzviratidzwa. Lou Jing anobvuma kuti haana kutambudzwa nekusarura muhuduku hwake uye achiri kuyaruka, kunze kwemibvunzo mishomanana iyo dzimwe nguva yainyanya kuratidza pamusoro pevara rake. Uye ikoko, ndakanga ndisingakwanisi kubatsira asi kufunga: pamberi pemibvunzo iyi iyo inobvumira, Lou Jing haana kuona kuti ruvara rwavo harusi ivo vakagoverwa, uye havana kutsvaga kuziva zvakawanda pairi? Hum! Pano zvakare, ndakati, mumwe nomumwe akasununguka kuti adire kuita vana veMetis, asi, zvakadaro, tinoda vabereki vedu kuti vasanyanya kuzvikudza, uye kuti vadzidzise vana ava ivo. Obama ndizvo zvaari nhasi (kuvimba mune izvozvi zvisizvo zvakasiyana) muchikamu nekuda kwemudzimai wake amai vachena vakamupa. Amai vaLou Jing vakaitei kuti vadzidzise mwanasikana wavo mune ruzivo rwechimwe chimiro chake? mune imwe nyika iyo kuberekwa kunotungamirira kune zvatinoziva, tinogona kukwazisa chiito chaamai vaLou Jing, avo vakachengetedza mafuta ayo kusvikira pakupedzisira. Asi, sei uchida kuchema apo mwanasikana wake akamubvunza pamusoro pababa vake? Lou Jing anotaura kuti akazviita kamwe chete, uye haana kumbotanga zvakare. Uye kutaura pamusoro pemuvara waLou Jing uye kuti haana kuziva kuti akanga ari mutema chete makore 20 (ah mwanasikana wangu iwewo!) (["Pandaiva muduku, Ndakanga ndisingazivi kuti ndakanga ndakasiyana nevamwe vanhu, saka ndaive akasiyana. "(Pandaiva muduku, ndakanga ndisingazivi kuti ndakange ndakasiyana nevamwe vanhu.) ndeye mushure mekunge tabatanidzwa mumakwikwi ayo ndakaona kuti ndakanga ndakasiyana nevamwe))], handina kuramba chido chekuisa mharidzo iyi yemumwe munhu asingazivikanwe pane imwe nzvimbo dzakawanda dzakashanyira:
"Sei chete mushure memakwikwi akaziva kuti akasiyana? Wakawana ganda rehuvara mushure mokupinda mumakwikwi here? Ndiani anotsigira varwi veChNUMX mumakwikwi enyika? ((Nei chete mushure memakwikwi aakaziva kuti akasiyana?) Akawana ruvara rweganda raro mushure mokupinda mumakwikwi here?))
Kuti tidzokere kune avo vanopikisa kuti kuva vasina ruzivo rwemadzinza, Lou Jing haagoni kukurudzira izvi nhasi, tinofanira kuzviyeuchidza kuti kazhinji, sevaduku, iwe unowanzobvunzwa kugara kona yako uye kwete kuwedzera. Kana uchangopinda musimba, matambudziko anotsanangurwa. Mumwe anogona kufungidzira kuti Lou Jing, asingazivi, akararama hupenyu hwake hushoma, asi sezvaakakwira pamusoro pekuratidzira, ruvengo rwevamwe rwakanyanyisa. Nenguva iyo ari muganhu wenyika, kwete! Uye nei akasvika panzvimbo yaive yake (5e)? Pardi, vachiri kufara kuti munyika yevanhu vanosvika mabhiriyoni, munhu wese haasi mubato "hapana vana Métis nokuti tinopedzisira tava kukanganisa tsika dzedu."
Baba vangu, iyi Africa-America, kunyanya kwete iyi yeAfrica?
Zvakanakisisa zvekupedzisira. Maererano nevakawanda vaLou Jing vanotaura, musikana naamai vake vanonzi vakataura kuti baba vake vaiva Africa American, kwete Africa. Hungu, chokwadi, iko mutsauko mukuru! Lou Jing akaramba kutaura ichi, asi kana iye zvechokwadi chitaurwa ichi, Mwari ngaandibatsire, nyika inoenda anopenga: imwe mestizo African-Chinese pakarepo anowana iye rasviba (ganda) pashure achipfuura ari paTV , munhau kuti anoisa Nhongonya mativi ane kunorambidzwa nyaya iri China (urudzi, kusanganisira Anti-dema), uye "akuvara" vanoda kuwana pacharo aikudzwa kuva African-American baba 100% African? Zvakanaka, ndinomira ipapo ndisati ndava nemusoro.
Ndekupi kwamunogona kutenga zvidhori zvakasviba zvevana venyu
Murume uyo anogadzirisa vakadzi, nyanzvi inoratidza nzira yaDkt Mukwege